China Gachn yakazara servo Mucheche Diaper Machine / mukuru diaper inoverengeka kuverenga kuverenga vagadziri vemachina uye vatengesi | GACHN
Yakatsanangurwa Chigadzirwa Tsananguro
Simba rekuisa ::
Yakazara auto mucheche mukuru diaper kupakata muchina
kushandiswa kwemhepo ï¼œ300L / min
Ruzivo ruzhaï¼œ85db (A)
1.Isu tinopa kuronga fekitori yevatengi, mutsara wakakwana uye kutenga zvinhu kana kutungamira
2. Kutevera-kumusoro sevhisi yezvigadzirwa: isu tichakuzivisa iwe kubvira chigadzirwa chichibva mufekitori.
3. Mushure mekupera kweinjini: isu tinobatsira vatengi vedu kudzidzisa chitubu zvishandiso muridzi wemahara.
4.Error kurapwa: dhipatimendi rebasa revatengi rinotora danho nekukurumidza pavanogamuchira chero kufona uye vape nyanzvi yekugadzirisa kuti ikubatsiregadzirisa matambudziko ako nekukurumidza.
Isu tine Great yakagadziriswa uye kugona kugona. Chero ipi inodiwa yakagadzirwa yakagadzirwa muchina inogona
yakagadzirwa uye inogadzirwa kuti ishandise zvakaringana uye mutengo unodhura, uchigadzira yako
kurongedza sisitimu inoshanda mushe.
1- Isu tinopa mavhidhiyo uye bhuku rekuraira kuratidza maitiro ekuisa.
2- Isu tinopa kudzidziswa kwekuisirwa kwemahara mufekitori yedu.
3 Tinogona kutumira nyanzvi kumafekitori evatengi ekuisa muchina uye kupa basa rekudzidzisa.
1- Rimwe gore remhando waranti uye yemahara hupenyu hwekutsigira.
2- Mahara emahara zvikamu zvaizopihwa kana muchina watsemurwa mukati mewaranti nguva.
3- Mushure menguva yewarandi, zvikamu zvakasara zvekutsiva zvinopihwa zvichibva pane kumwe kubhadharwa.
Muchina uyu uri nyore kushanda, uine servo mota nePCC inobata pani, iyo inogona kugadzirisa tembiricha yekupaka, kurongedza kumhanya uye materu kureba zvakaringana. Muchina uyu unogadzira mashoma magetsi ekubatanidza dhizaini, ine basa re otomatiki kukanganisa alarm system uye chiratidzo chekuraira kwekuchengetedza.
Mutauro wepanobata screen pikicha unogona kuve wakasarudzika kugadzirwa zvinoenderana nemutengi.
1year, asi kuchengetedza kwehupenyu hwese
3.Iri yakakwira mutengo-effiecienty, yakasimba kugadzirwa kumhanya.
4.The isina stainless simbi pamusoro hazvisi nyore kuva nemhinduro ane makemikari zvinonhuwira.
5.Iyo hupamhi uye kureba kwepakeji uye mapampu emvura anogona kugadziriswa sekuda kwako.
Kurongedza neyakajairika kutumira nyaya yematanda kana pallet yemapuranga ine bhegi rekuvhara iyo inokodzera kutakura chinhambwe uye yakadzivirirwa kubva kumarara, kuhukura kuitira kuti isvike kwairi kusvika pasina kukuvara.
1. Tekinoroji yaizogamuchirwa kufekitori yedu kuti ifunde mashandiro emuchina usati waendesa masvondo 1-2.
2.Zvezve, mushure meMuchina mufekitori yako mahunyanzvi edu anozotumirwa kunzvimbo yako yekuitira kuisa, kuyedza muchina uye kudzidzisa vashandi vako.
3.One gore rewarandi, yemahara kubvunza service, yakakodzera zvikamu zvemuchina zvakapihwa.
? Rimwe gore gurantee remuchina wose, hupenyu hwese hunoteera basa.
? Maawa makumi maviri nemasere rutsigiro neemail.
? Vanamazvikokota vakatarisana kuseta-uye vashandi kudzidziswa
? Shandisa- inoshamwaridzana Chirungu kune inoshanda system.
1) .Chishandiso ichi chine kuvakwa kwakanaka, chine chiitiko chakagadzikana uye chakavimbika, uye mashandiro acho ari nyore kubata.
2) .Kumhanya kweichi chishandiso kunodzorwa necomputer-computer controller.
3) .Iri yakarongedzwa neye OMRON mufananidzoelectric traching system yekukwira kwakanyanya.
4) .Iyo nzvimbo yakavharwa uye yakachekwa neiyo yakanyatsojeka uye kupisa kwezvisimbiso zvinodzorwa zvakasiyana uye ndizvo
kukwana kune akawanda marudzi emapaketi ekuisa chisimbiso anotaridzika zvakanaka uye akasimba.
5) .Kunyange kuri kuenderera nekugadziriswa kwekumhanya nekushandurwa kwema frequency, hapana kupindirana kuchaitika mune shanduko.
6) .Aziva azere otomatiki mashandisiro eizvi zvinotevera maitiro, aya: zvinhu kupeta, kuumba,
kutemwa kwe; kudyisa; mushonga mvura (disinfector) kupuruzira uye kurongedza.
7) .Iine yakazara otomatiki denderedzwa system kusanganisa mabasa ekuratidzwa kwemushonga wemvura mushonga,
kupfira, mushonga mvura inoyerera kutonga, uye kuunganidza.
8) .kuyerera kwemuti mushonga unogona kuchinjiswa nebhuku rakasununguka.
9) .Kana iyo kodhi yeprinta yakarongedzwa, iyo yekugadzira date serial nhamba inogona kudhindwa otomatiki.
Kuve nechokwadi chemhando yemashini edu akadzipukuta michina, Vagadziri vedu vanoteerera kune ese ruzivo rwezvikamu zvemuchina. Isu tinotenda kuti pamusoro pevashandi vane hunyanzvi, maturusi anodiwa kuti zvigadzirwa zvigone kutenderedza mashandiro emuchina uye kuderedza kutadza kuyera.
Kubva pakusimudzira, kugadzira, kuisa, nzira yese yekuyedza, isu tinoshandira nyanzvi kuti dzitarise kuongororwa kwakasimba kuti zvigadzirwa zvive nemhando yepamusoro.
otomatiki beche remuchina,
otomatiki stacking muchina
Yepfuura: Hutsanana napkin uye panty liner pads kuverenga uye muchina wekurongedza
Inotevera: Mitsubishi Q170MCPU-S1 Mucheche Diaper Machine 600 pcs / min Kuverenga Speed
Mucheche diaper mukuru diaper stacking kuverenga mach ...